२०७४ माघ २९ गते उपलब्ध भएका सबै खबरहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् !
२०७४ फागुन ११ गते उपलब्ध भएका सबै खबरहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् !
कञ्चनपुरको पुनर्वासमा क्षत-बिक्षत अवस्थामा एक बृद्धाको शव फेला ।।
राष्ट्रपतिका लागि फागुन २९ गते निर्वाचन हुने ।।
१० औँ संस्करणको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता बिहिबारबाट सुरु ।।
प्रदेश ७ को सभामुखमा थापा निर्विरोध निर्वा्चित ।।
प्रदेश नम्बर सातको सभामुखमा अर्जुनबहादुर थापा निर्वा्चित भएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले थापालाई निर्विरोध निर्वा्चित भएको घोषणा गरेको हो । सभामुखमा थापाको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहने नेपाली काँग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएपछि गठबन्धनका उम्मेदवार थापा निर्विरोध निर्वा्चित भएका हुन् । सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी ज्येष्ठ सदस्य दिव्यश्वरी शाहले थापालाई निर्विरोध निर्वा्चित भएको घोषणा गर्दा सांसदहरुले टेबुल बजाएर समर्थन गरेका थिए ।
‘एउटामा प्रस्ताव पेश हुन आएकोले प्रदेश सभा संचालन अन्तरिम कार्य्विधि २०७४ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम माननीय श्री अर्जुनबहादुर थापा प्रदेश सभामुखमा निर्विरोध निर्वा्चित भएको घोषणा गर्दछु ।’ शाहले भनिन् ।
बझाङको प्रदेश सभा क्षेत्र १ बाट निर्वा्चित एमाले नेता थापाको प्रस्तावक एमाले सांसद दीर्घ सोडारी र समर्थक माओवादी सांसद त्रिलोचन भट्ट रहेका थिए । निर्वाचित सभामुख थापालाई आजै साँझ प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले सथप ग्रहण गराएका छन् ।
हाल एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य रहेका ६२ वर्षीय पूर्व्शिक्षक थापा शिक्षण पेशाकै क्रममा राजनीतिमा लागेका हुन् । २०३६ सालदेखि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा आवद्ध भएर राजनीति शुरु गरेका थापा २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा बझाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएका थिए । अर्थशास्त्र विषयमा स्नातक थापाले ‘विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन’ र माक्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग–जनताको जनवाद’ पुस्तक पनि प्रकाशित गरेका छन् ।
‘पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्छु’ ः सभामुख थापा ।।
सभामुखमा निर्विरोध निर्वा्चित भएका थापाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका सांसदको भावना समेटेर आफूले काम गर्ने बताए । उनले प्रदेश सभाले तत्काल धेरै कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरुसंग छलफल गरेर कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताए । ‘पार्टीभन्दा माथि उठेर सभामुख पदको गरिमा कायम राख्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछु’ निर्वाचित सभामुख थापाले भने ।
उपसभामुको निर्वाचन फागुन ६ गते ।।
कञ्चनपुरमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सव शुरु ।।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सव शुरु भएको छ । सोमबारदेखि कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा महेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सव शुरु भएको हो । ७ नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख मोहन राज मल्लले महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभयो । महोत्सव उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख मल्लले आर्थिक विकासका लागि मेला लाभदाय हुने बताउनु भयो । प्रदेश प्रमुख मल्लले ७ नम्बर प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि राजनीति भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
यस्तै महोत्सवमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टले महोत्सवबाट आर्थिक विकासको अपेक्षा लिएको बताउनु भयो । पुर्व वाणिज्य मन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी नेता लेखराज भट्टले आफ्नै पालामा दोधाराचाँदनीमा सुक्का बन्दरगाह घोषणा गरिएको बताउदै संचालनमा सरकारी तर्फबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारले समेत आर्थिक क्षेत्र पहिचान गरेर अघि बढाउन उहाले सुझाव दिनुभयो । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय स्तरमा उत्पादित बस्तुको बजार प्रर्बद्धन र व्यापार बृद्धिका लागि औद्योगिक व्यापार महोत्सव आयोजना गरेको प्रति उहाँले प्रसंशा गर्नुभयो ।
यस बर्ष ७ नम्बर प्रदेशका ९ वटै जिल्लाबाट उत्पादित बस्तु तथा सेवाको प्रदर्शन गरिने छ । स्थानीय पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि टुर प्याकेज कार्यक्रम समेत संचालन गरिने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेश रावलले बताउनु भयो । सुदूरपश्चिम क्षेत्रको स्थानीय कला, संस्कृती, खाद्य परिकारको समेत प्रबद्र्धन गरिने छ । महोत्सवमा विभिन्न सेवा तथा बस्तुका १ सय ५० स्टल राखिने छन् । दैनिक उपभोग्य समाग्री, गारमेण्टका समाग्री, ईलेक्टोनिक्स, अटो मोबाईल, कृषिका आधुनिक औजार सामग्री, बाल उद्यान, दुग्धजन्य बस्तु लगायतको व्यापार गरिने छ । सुदूरका सबै जिल्लाको कला, संस्कृती र बस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनका साथै भारतको उत्तराखण्ड बनबासा, टनकपुर, खटिमा क्षेत्रका कलाकारले समेत कला प्रस्तुत गर्ने छन् । स्थानीय कलाकारलाई विशेष प्राथमिता दिईने आयोजकले जनाएको छ ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष खगेश्वर बोहराले महोत्सव अवधिमा ५ करोडको कारोबार हुने अनुमान गरिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार आयोजकले ६२ लाख, ५० हजार आम्दानी गर्ने र २६ लाख, ५० हजार नाफा हुने अनुमान गरिएको छ । महोत्सव अवलोकनका लागि विद्यार्थी सहुलियत २५ र साधारण तर्फ ५० रुपैया टिकट निर्धारण गरिएको छ । मेलामा डाईनासोरको समेत प्रदर्शन गरिने छ । १० दिनसम्म संचालन हुने महोत्सवमा २ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकले दाबी गरेको छ ।
स्थानीय तहमा एफ.एम. सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पार्न लागिएको मस्यौदाका विषयमा छलफल ।।
स्थानीय तहलाई एफ.एम. सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पार्न लागिएको मस्यौदाका विषयमा आज छलफल गरिएको छ । विश्व रेडियो दिवसको पुर्व सन्ध्यामा भीमदत्त नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको मस्यौदाका विषयमा आज छलफल तथा परामर्श गरिएको हो । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका मस्योदा समितिका संयोजक परमानन्द जोशी, सदस्यहरु हिमाल चन्द, लालबहादुर शाही, अकोर्याबका केन्द्रिय सदस्य तथा पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष विष्णु अवस्थी, बानका सुदुरपश्चिम सहसंयोजक ज्ञानेन्द्र महता, पत्रकार महासंघकै कोषाध्यक्ष चुडामणि अर्याल, जिल्ला हुलाक कार्यालयका कार्यालय प्रमुख देवसिंह सामन्त, गैरसरकारी संस्था महासंघका सदस्य अन्जु जोशी भट्ट, पत्रकार महासंघका सदस्य कुन्दन पाण्डेय लगायतको उपस्थितमा गरिएको छलफल तथा अन्तरकृयामा स्थानीय तहले रेडियो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तयार पार्न लागेको मस्यौदा अपुर्ण रहेको, यसका केही वाक्यांशहरुले एफ.एफहरुलाई बन्द गर्न सक्ने आसय व्यक्त गरेको र एफ.एम प्रबद्र्धनको निति भन्दा उद्योग धन्दा सम्झेर कर असुली गर्ने खालका बनाइन लागेकोले यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यक्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका मस्यौदा निर्माण समितिका सदस्यहरुले रेडियोहरुलाई स्वतन्त्रता पुर्वक संचालन गर्ने गरी नै मस्यौदा निर्माण गरिने बताउनु भएको छ ।
रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा अत्तरियाको अध्यक्षमा डा. मौनी ।।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा अत्तरियाको दशौँ अधिबेशन आज सम्पन्न भएको छ । अधिबेशनले पदमा अस्पतालका संञ्चालक डा. नर बहादुर मौनीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । समितिका सदस्यहरु मन्जु साउद, ईश्वरी कठायत, भरत खड्का, कमल कडायत, लक्ष्मीराज पन्त, बिक्रम बिश्वकर्मा, धर्मराज भट्ट, साबित्रा जोशी चयन हुनुभएको छ । रेडक्रस उपशाखा अत्तरियाका सभापति शेर सिंह खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न अधिबेशनमा रेडक्रसका जिल्ला सभापति उत्तम जोशी प्रमुख अथिति रहनुभएको थियो ।
शिवरात्री पर्वलाइ विकृत्ती रहित बनाउनु पर्ने समाजका अगुवाहरुको धारणा, गाजा, भाङ, र धतुरो प्रयोग गरे तत्काल कारवाहि गरीने प्रहरीको भनाइ ।।
शिवरात्री हिन्दुहरुको महान पर्व हो । शिवरात्री पर्वका अवसरमा कञ्चनपुर र कैलाली लगायत विभिन्न क्षेत्रका शिव मन्दीरहरुमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ । तर आजभोली शिवरात्रिका नाममा विकृती बढ्दै गएको छ । शिवरात्रिको समयमा गाँजा, भाङ, धतुरो लगायत अन्य नशालु पदार्थ प्रयोग तथा वेचविखन पनि बढ्दो क्रममा छ । चाडपर्वमा असल र राम्रा पक्षको अनुशरण गर्नुपर्ने र बिकृत्ति हटाउँदै जानुपर्ने समाजका अगुवाहरुको धारणा छ । प्रहरीले पनि गाँजा, भाङ, धतुरो लगायत कुनै पनि नशालु पदार्थको प्रयोग गरे कार्वाही गर्ने जनाएको छ । एक रिपोर्ट.....
शिवरात्री दर्शन मेला र महायज्ञको तयारी पुरा ।।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ स्थित शिवपुरी उत्तर रामेश्वरम् ज्योर्ति्लिंगधाममा आयोजना हुने शिवरात्री दर्शन मेला र महायज्ञको तयारी पुरा भएको छ । आज शिवपुरी उत्तर रामेश्वरम् ज्योर्लिगधाममा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा धामका अध्यक्ष श्यातायलले शिवरात्री मेला र महायज्ञका सबै तयारी पूरा भएको बताउनुभयो । भोली फागुन १ गते शिवपुरीधाममा शिवरात्री मेला, फागनु २ गते देखि श्रीमद्देवी भागवत प्रवचन तथा प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ संचालन हुनेछ । दर्शनार्थीहरुलाई मेला दर्शन तथा पूजा अर्चनाका लागि सहज होस भन्ने हेतुले व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त बनाइएको धामका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलदेव भट्टले बताउनु भयो । शिवरात्रीको अवसरपारी भोली विहानै देखि पूजाआजाको व्यवस्था मिलाइको छ । यसपालिको शिवरात्री मेला र महायज्ञमा २ लाख बढी दर्शनार्थीहरुको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिवरात्रीलाई मध्यनजर गरेर झलारीको मुख्य वजार क्षेत्रमा सरसफाई ।।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले हिन्दुहरुको महान पर्व शिवरात्रीलाई मध्यनजर गरेर झलारीको मुख्य वजार क्षेत्रमा सरसफाई गरेको छ । झलारी वजारको यात्रु प्रतिक्षालयवाट आरम्भ भएको सरसफाई अभियानले झलारीको मुख्य वजार र खुलामञ्च सरसफाई गरेको हो । सरसफाई अभियानको सुरुवात गर्दै नगर प्रमुख दिल बहादुर ऐरले शुक्लाफाँटाको स्वच्छता हरेक नागरिकको दायित्व भएकोे वताउनु भएको छ । सरसफाई अभियानले आम नागरिकलाई सरसफाई प्रति सचेत वनाउनका लागि पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको उहाँले वताउनु भएको छ । यसै गरी उप–प्रमुख तुलसी हमालले स्वच्छ नगरको पहिचान वनाउनका लागि शुक्लाफाँटा नगरबासीहरु सक्रिय हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । सरसफाई कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झलारी उप–शाखा, सशस्त्र प्रहरी बल, शैलेश्वरी गण, ईलाका प्रहरी कार्यालय झलारी, झलारी पिपलाडी उद्योग वाणिज्य संघ, शुक्ला युवा समाज, शिक्षक, व्यापारी र संचारकर्मी लगायतको उल्लेखनिय सहभागिता रहेको थियो ।
लागु औषध सहित एक जना पक्राउ ।।
लागु औषध सहित कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित सीमावर्ती डोकेबजारबाट प्रहरीले २२ वर्षिय युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका ७ का हरिश गौतम रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञान बहादुर सेटीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार पक्राउ परेका गौतमको साथबाट लागु औषध नाईट्राभेट २४ पत्ता, स्पास्मो आठ पत्ता बरामद भएको छ । लागु औषध सहित पक्राउ परेका गौतमलाई हिरासतमा राखि कारवाही भइरहेको छ । प्रहरीले यस अघि समेत सोही स्थानबाट पाँच जना भन्दा बढीलाई लागु औषध सहित पक्राउ गरी कारवाही प्रकृया अगाडी बढाएको थियो । स्थानिय युवाहरुले नेपालमा प्रतिबन्धित गरिएको लागु औषध भारतीय बजार गौरीफण्टा र पलिया लगायत क्षेत्रबाट ल्याउने गरेका छन् ।
ऐतिहासिक डेउडा गीत न्याउल्या को एक कार्यक्रमका विच विमोचन ।।
सुदुरपश्चिमका कलाकार भुवन विरहीको संयोजनमा ऐतिहासिक डेउडा गीत न्याउल्याको एक कार्यक्रमका विच विमोचन गरिएको छ । प्रज्ञा भवन काठमाण्डौमा सुचना तथा संचार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको प्रमुख आतिथ्य तथा भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्री विरबहादुर बलायर र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दको विशिष्ठ आतिथ्यमा उक्त गीति एल्बमको विमोचन गरिएको हो । सुदुर तथा मध्य पश्चिमका १३२ वटा कलाकारहरुको सामुहिक स्वरमा रहेको गिति एल्बम न्याउल्या अहिले सम्मकै लामो र फरक शैलीको रहेको विग परिबेश डिजिटल रेकडिंग स्टुडियोका प्रबन्धक तथा कलाकार भुवन विरहीले बताउनु भएको छ ।
प्रचुर सम्भावना बोकेको ‘आलिताल’ संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नसक्दा ओझेलमा ।।
प्रदेश नं. ७ को महत्वपूर्ण पर्यटकीय दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना बोकेको ‘आलिताल’ संरक्षण र संवद्र्धन गर्न नसक्दा ओझेलमा परेको छ । डडेल्धुुराको भित्री मधेस आलिताल गाउँपालिका ३ मा रहेको आलिताल सम्बन्धित निकायले तालको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नमा ध्यान नदिँदा ओझेलमा परेको हो । समुन्दी सतह बाट करिब ८०० मिटर उचाईमा महाभारत पहाडी श्रृखलाको फेदमा रहेको ताललाई व्यवस्थित गर्न सके पर्यटकहरुको संख्या बढाउन सकिने भएता पनि कुनै निकायले पहल नगर्दा अहिले ताल ओझेलमा रहेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । १ हजार १७५ मिटर लम्बाई तथा करिब ४०० मिटर चौडाइ रहेको ताल महाभारतको चुरेबाट विभिन्न फोहर पदार्थ जम्मा हुँदै गएपछि अहिले साँघुरिँदै गएको छ । तालको वरिपरि बिरुवा उम्रनुका साथै फोहरवस्तु थुपारिँदै गएको छ ।
धार्मिक एतिहासिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने सो ताल सम्म पुग्ने सडक समेत अधुरै अवस्थामा छ । आलिताल बारे प्रचार प्रसार हुन नसक्दा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन । थुप्रै सम्भावना बोकेको ताललाई प्रचार तथा संरक्षण गर्न नसकीएको आलिताल गाउँपालिकाका ८ का रामदत्त जोशीले गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय र सरोकारवाला निकायले तालको संरक्षणमा ध्यान नदिएकै कारण आलिताल ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । एक घन्टाभन्दा बढी पैदल हिँडेर ताल पुगेका पर्यटक मोरङका अशोक राईले ताल पुरिने अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
लघु उद्यम बिकास सम्बन्धी १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज सम्पन्न ।।
परशुराम नगरपालिकामा लघु उद्यम बिकास सम्बन्धी १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ । परशुराम नगरपालिकामा सम्पन्न कार्यक्रममा गरिबी न्यूनीकरणका लागि लघु उद्यम बिकास कार्यक्रम का अध्यक्ष शिद्वराज भट्ट र कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र ठगुन्ना र परशुराम नगरपालिकाका बिभिन्न वडाका वाड अध्यक्ष वडा सचिवको सहभागिता रहेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी,बस्ती छनौट,नगर उद्यम बिकास समिती गठन र खर्च अनुमोदनको बिषयमा ब्यापक छलफल गरीएको हो । संस्थाका अध्यक्ष शिद्वराज भट्टले कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
महिला घर भित्रै मृत भेटिइन, हत्याको आशंकामा श्रीमान प्रहरी नियन्त्रणमा ।।
अछामको कमलबजार नगरपालिका वडा नम्बर २ मा एक महिला आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी छिन् । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार ३३ बर्षीया पवित्रा खडका आईतवार राती आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् । मृतक पवित्राको टाउको लगायत शरिरका बिभिन्न भागमा गहिरो चोट देखिएकोले उनको मृत्यु नभई हत्या हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ । स्थानीयले खबर गरेपछि आज बिहान घट्नास्थल पुगेको प्रहरीले हत्याको आशंकामा मृतकका श्रीमान ३५ बर्षीय केशव खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको अछामका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ददिराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । शव नजिकै चिर्पट पनि भेटिएकाले चिर्पट प्रहार गरेर उनको हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको न्यौपानेले बताउनुभयो । मृतकका दुई छोरा र दुई छोरी रहेको बुझिएको छ ।
नेपालको पूरै जनसंख्याको पहुँच मोबाइल फोनमा भए पनि शौचालयमा प्रयोग गर्नेको अनुपात न्यून ।।
नेपालको पूरै जनसंख्याको पहुँच मोबाइल फोनमा भए पनि शौचालयमा प्रयोग गर्नेको अनुपात न्यून रहेको एउटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय एजेन्सीले औंल्याएको छ । नेपालको पूरै जनसंख्याको पहुँच मोबाइल फोनमा भए पनि शौचालयमा प्रयोग गर्नेको अनुपात न्यून रहेको एउटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय एजेन्सीले औंल्याएको छ । विश्व बैंकको एउटा आँकडाले सन् २०१५ सम्ममा सत प्रतिशत नेपालीमा मोबाइलको पहुँच पुगेको देखाउँदै सोही वर्ष सम्म शौचालयमा ५० प्रतिशतको मात्र पहुँच रहेको औँल्याएको हो । ‘मोबाइल र शौचालय दुवै महत्वपूर्ण छन् । तर नेपालले सरसफाईका लागि शौचालयको पहुँच बढाउनु पर्ने देखिएको छ’, विश्व बैंकको रिपोर्ट विश्लेषण गर्दै कोड फर नेपालले भनेको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २००५ सम्म ३० प्रतिशत नेपालीको मात्र शौचालयमा पहुँच थियो । त्यतिबेला एक प्रतिशतभन्दा कम नेपालीको पहुँच मोबाइलमा थियो । त्यसपछि मोबाइल प्रयोगकर्ता बढे पनि शौचालय प्रयोगकर्ताको अवस्थामा भने उल्लेखीय सुधार आउन सकेन ।
News @2074- 10-11 Night
स्वस्थानी ब्रत कथा : भाग १२